Fifandraisana iraisam-pirenena · Marsa, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fifandraisana iraisam-pirenena · Marsa, 2013
Tantara mikasika ny Fifandraisana iraisam-pirenena tamin'ny Marsa, 2013
Amerika Latina22 Marsa 2013
Ao anatin'ny Fifanarahana Ramsar, nanendry faritra mando telo vaovao ny governemanta Boliviana ho isan'ny faritra arovana any ‘Llanos of Moxos’, faritra arovana izay manome ny haben'i Pays-Bas sy Belzika mitambatra. Midera ilay fanapahan-kevitra ireo mpikatroka mafàna fo sy fikambanana mpiaro tontolo iainana, no sady manentana ihany koa hiasàna mafy ho...
Azia Atsinanana17 Marsa 2013
Naw Kham, lehibenà mpivarotra zava-mahadomelina Birmana dia novonoina tamin'ny alàlan'ny tsindrona tany Shina. Nanaitra sy nahatezitra ireo vahoaka tany Myanmar ny nahalalàna fa nalefa mivantana tamin'ny fahitalavitra ny famonoana an'i Naw Kham. Nandiso fanantenana ny sasany kosa ny tsy nanaovan'ny governamanta fifanarahana fanakalozana gadra tamin'ny Shina.
Eoropa Afovoany & Atsinanana13 Marsa 2013
Ny 5 Martsa, nolanian'ny Parlemanta Moldavy ny fitsipaham-pitokisana, itsipahana [ro] ny governamanta fiaraha-mitantan'ireo antoko telo mankasitraka ny fiarahana amin'i Eoropeana, notarihan'i Vlad Filat. Herinandro vitsy tany teo aloha teo, i Moldovia no tahaka ny fanantenana lehibe tany amin'ny sisintany Atsinanan'ny Fiombonambe Eoropeana. Mizotra mankany aminà krizy politika henjana izy ankehitriny....
Azia Atsinanana10 Marsa 2013
Azia Atsinanana08 Marsa 2013
Nambabo ny fon'ireo media vaventy i Fu Ying, mpitondra teny vaovaon'ny parlemanta, tao anatin'ilay kabariny fandraisana voalohany ny asany nataon'ny ho an'ny mpanao gazety, saingy ireo mpisera ety anaty aterineto manao jery maika eny antsefantsefan'ny fanamarihany eny kosa dia niahiahy hoe mbola mpanao kobaka am-bava tsy misy toy izany i...